EJICHIE nnukwu ụgbọelu jet anọ. Anọ akpọkaa. Mbibi nke ihe owuwu ndị a ma ama. Onyinyo nke ụgbọelu 767 nke subanyere n’Ụlọ Elu Abụọ ahụ Yiri Ibe Ha, bụ́ nke e gosiri ugboro ugboro na telivishọn.
Mwakpo ahụ e mere na September 11, 2001, bụ mmalite nke oge ọhụrụ na-emenye ụjọ nke ime mwakpo nke ndị na-eyi ọha egwu. Usoro iji ụgbọelu eme njem ghọrọ usoro e si egbu ndị mmadụ, ụgbọelu ghọkwara bọmbụ na-agba ihe ọkụ.
N’ihi ya, e nwewo ndị ọhụrụ na-eji ụgbọelu eme njem ụjọ na-atụ: Ndị na-echebu na ọ dịghị ihe ga-eme ha ma na-atụzi egwu na ndị na-eyi ọha egwu pụrụ ịwakpo ha. Ọzọkwa, ọtụtụ ajọ ihe mberede ụgbọelu na-enweghị ihe jikọrọ ha na ndị na-eyi ọha egwu bụ́ ndị mere ka September 11 gasịrị amụbawo ụjọ ọtụtụ ndị na-atụ iji ụgbọelu eme njem.
N’eziokwu, iji ụgbọelu eme njem bụ ihe ndị oké ozu nke aka ọtụtụ nde mmadụ n’ụwa nile na-adịghị eru. Otú ọ dị, nye ndị ọzọ, iji ụgbọelu eme njem bụ ihe ha na-aghaghị ime mgbe nile. Nye ndị na-arụ ọrụ ndị chọrọ ka ha na-eme njem achụmnta ego mgbe mgbe, ha apụghị izere iji ụgbọelu eme njem. Ọtụtụ mgbe, ndị ozi ala ọzọ na ndị ozi bụ́ Ndị Kraịst aghaghị iji ụgbọelu mee ogologo njem mgbe ha na-aga ebe e zigara ha na mgbe ha na-alọta. Ọbụna nye ndị ogbenye, mgbe ụfọdụ ụgbọelu bụ nanị ihe kwesịrị ekwesị iji mee njem n’oge e nwere ọnọdụ ahụ́ ike chọrọ ime ihe ngwa ngwa. Ọtụtụ puku ndị na-anya ụgbọelu na ndị na-arụ ọrụ n’ime ụgbọelu na-enwetakwa ihe ha ji ebi ndụ site n’iji ụgbọelu eme njem.
Ọtụtụ n’ime ndị a na-eji ụgbọelu eme njem, bụ́ ndị ụjọ na-atụ ha onwe ha ma eleghị anya, aghaghị ịdị na-emeda di ma ọ bụ nwunye ha na-enwe nchegbu na ụmụ ha na-atụ ụjọ obi tupu ha ahapụ ụlọ. Ka iji ụgbọelu eme njem bụ́ nke na-enwebughị ihe ọ bụ na-aghọ ahụmahụ ọjọọ, ndị njem na-enwezi nchegbu ma iji ụgbọelu eme njem ọ̀ ka bụ ụzọ dị mma isi na-eme njem.
Iji tụlee nsogbu ndị a, Teta! kpọtụụrụ ndị ọkachamara n’ihe banyere nchebe, ndị na-arụ ọrụ n’ọdụ ụgbọelu, ndị isi ọdụ ụgbọelu, na ndị na-arụzi ụgbọelu. O yiri ka ha nile kwenyere na nke a: Ọ bụ ezie na iji ụgbọelu eme njem ka bụ otu n’ime ụzọ kasị bụrụ ndị na-adịghị ize ndụ e si eme njem, ihe iyi egwu ndị ọhụrụ a na-enwe chọrọ ka e chepụta ụzọ ndị ọhụrụ nke isi mee ka ndị na-eji ụgbọelu eme njem nọrọ ná nchebe karị.
Isiokwu ndị na-esonụ ga-atụle ihe ịma aka ndị dị na ya na ihe ndị ị pụrụ ime n’onwe gị iji mee ka ị ghara ịnọcha n’ihe ize ndụ ma nwekwuo ahụ́ iru ala mgbe i ji ụgbọelu na-eme njem.